Maya Magazine: ဂယက်မာယာ ၂၀၀၁ ခု၊ မတ်လ ၂၃
မာယာ ၂၀၀၁ ခု၊ မတ်လ ၂၃
မာယာ 2001 March မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
01 / 08 / 01
Dear U Aye Win,
At last I am sitting down to write youashort letter in praise of Ma-ya magazine. Only recently, with the publication of the small book of poems by Kabya Saya Tin Moe, have I learnt about your Hundred Moons (La-min-taya)publishing project. I welcome it most warmly and say 'Tha-du,Tha-du, Tha-du.' It is an excellent idea of yours to make the work of some of Burma's leading writers available to the many, many Burmese now living far away from their motherland.
Two aspects of your publications are especially worthy of praise. They are printed on fine paper, well set out and beautifully illustrated. And the selection of items ranges widely from earlier authors such as Theik-pan Maung Wa right through to younger writers today such as Nu Nu Yiy(Inwa), Gyu and Nyi Pu Lay. At the same time I was glad to read the work of some of the most important writers of the post-1945 years, especially Saya Mya Than Tint, Dagon Ta-ya and Ludu Daw Amar.
I began my studies of Burmese literature in 1954. One of the the first things I read was Theikpan Maung Wa's "Oxford Dairy". Another early writer I am very fond of is P. Monin, it is amusing to read in his autobiography why he decided not to becomeaCatholic priest. In fact I have translated the whole of this work into English.
I hope you will continue with publishing Ma-ya and that you will be able to continue to include an even wider range of authors in the future.
Khin-min lay-za lyet
Anna Allott(Khin Khin Chaw) - Banbury (near Oxford), England
ဒီတခါတော့ မာယာအကြောင်း နဲနဲ ပြောချင်ပါတယ်။
ဒီနေ့ ပြည်ပမှာ ထုတ်နေကြတဲ့ စာနယ်ဇင်းတွေထဲမှာ မာယာလိုစာစောင်မျိုး တစောင်မှ မရှိသေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာရော ပြည်ပမှာပါ လိုအပ်နေတဲ့ စာစောင်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
စာဖတ်သူတဦး အနေနဲ့ ကျနော်မြင်တာပြောရရင်-
မာယာမှာ ခေါင်းကြီးပိုင်း (သို့) အယ်ဒီတာ့အာဘော် စတာတွေမပါတာ သတိထားမိတယ်။ ဒါကိုက မာယာရဲ့ မူထင်ပါရဲ့။ အဆင့်ရှိတဲ့ စာပေတွေ ရွေးပြီးတင်ပြနေရာမှာ ဘာမှ သိပ်မပြောပဲနေတာလဲ မဆိုးပါဘူး။
ဒီစာစောင်ထဲ ဦးတင်အောင်ကို အထူးဂုဏ်ပြုထားတာ တွေ့ရတဲ့အတွက် ဝမ်းလဲသာ ကျေးဇူးလဲတင်မိပါတယ်။
စစ်အုပ်စုရဲ့ ရက်ရက်စက်စက် ဖိနှိပ်မှုကြောင့် စာပေလောကမှာ ဗုံမဟုတ် ပတ်မဟုတ်လူတွေ နဲ့ မော်ဒန်သမားတွေ တွင်ကျယ်နေပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကို ကျနော်တို့ ပြောင်းပြန် ပြန်လှန်ဖို့ လိုပါတယ်။
မာယာမှာလဲ ဒီရည်ရွယ်ချက် ရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
မေလ ၁၃ ရက်၊ ၂ဝဝဝ။ ည ၉း၃၈
မာယာစာစောင် ရရှိပါသည်။ ဖတ်လို့ အရသာ ရှိပါသည်။ ကိုတင်အောင်အကြောင်း စာမူတွေ ဖတ်ရတော့ ၀မ်းနည်းလွမ်းဆွပ် ရပါသည်။
၂၀၀၀ခု၊ ဧပြီ ၁၂ ရက်၊ အကြပ်နေ့။
Posted by Maung Aye Win at 4:24 PM
ဓါတ်ရှင်ကြိုက်တဲ့ငှက်ကလေးရေးသူ- နုနုရည် (အင်းဝ)
မာယာမှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာများ
ဂယက်မာယာ ၂၀၀၁ ခု၊ မတ်လ ၂၃
ပြည်သူ့လင်းယုန်ကြီး ထွက်ခွါပျံသန်ခြင်း အနှစ်၃၀ အမှ...
မမေ့နိုင်တဲ့ ဘန်ကောက်သူခိုးနဲ့ မန်းကျည်းသီးထောင်းေ...